Cash Crisis Archives - The Source
4 months ago by AlfonceEconomy
HARARE, October 11 (The Source) – Econet Wireless Zimbabwe’s mobile money platform, EcoCash on Wednesday suspended the use of its debit card to pay for international transactions, as the country’s foreign currency shortage intensifies. Local financial institutions have been finding it hard to meet foreign… Read More
VICTORIA FALLS, May 20 (The Source) –Zimbabwe has contracted a private company in Germany to print bond notes that have sparked public outrage since theirintroduction was announcedearlier this month, a central bank official said on Friday. In a presentation to the Chamber of Mines of… Read More
‘Shelve bond notes’ – industry tells RBZ
HARARE, May 11 (The Source) – Zimbabwe’s business leaders have asked the central bank to shelve its plan to introduce domestic “bond notes”, voicing their distrust of government methods of dealing with an acute cash shortage that has hit the economy. The central bank last… Read More
HARARE, May 10 (The Source) – Zimbabwe’s Reserve Bank on Tuesday abandoned plans to automatically convert export proceeds into the Rand and Euro currencies, the second tweak within a week of a major policy intervention, as it battles a crippling cash shortage. On May 4,… Read More
Breaking news…Zim to introduce bond notes as cash shortages bite
HARARE, May 4 (The Source) – Zimbabwe says it will introduce local “bond notes” and has tightened daily withdrawals to ease an acute shortage of cash, central bank governor, John Mangudya said on Wednesday. The public will now only be able to withdraw a maximum… Read More